Ny Birao Charcuterie Vaovao Manaraka: Raiso ny Akondronao!
Ny boards charcuterie mivadika, zava-pisotro misy akondro sy tsindrin-tsakafo ary tsindrin-tsakafo vaovao amin'ny klasika fampiononana Meksikana dia anisan'ireo mpikatroka lehibe 10 mitondra ny fironana menu ho an'ny 2022, hoy ny faminaniana Flavor & The Menu ao amin'ny edisiona Top 10 Trends vao nivoaka, an-tserasera amin'ny getflavor.com .
Isan-taona, i Cathy Nash Holley sy Katie Ayoub, tonian-dahatsoratry ny Flavor & The Menu, dia manangona andiana fironana izay hanakoako ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary hanome fahafahana hitombo ho an'ny indostrian'ny trano fisakafoanana. Asongadin'izy ireo ny fironana tsiro vao misondrotra, manome hevitra izay manazava ny "nahoana" ao ambadiky ny tsirairay amin'ireo 10. Ity olana malaza ity dia toy ny sori-dalana ho an'ny fanavaozana, manome hevitra ho an'ny mpamorona sakafo ho an'ny fampiharana an-tsena.
"Ny fanangonana Top 10 Trends amin'ity taona ity dia manondro fiovana, izay ny mpanjifa tanora no tena eo amin'ny seza mpamily raha ny momba ny aingam-panahy momba ny sakafo sy zava-pisotro," hoy i Cathy Nash Holley, Flavor & The Menu's Publisher/Editor-in-Chief. "Ny fikarohana nataonay dia nanaporofo fa ny media sosialy dia nandroso ho amin'ny toerana iray izay mahatonga ny fironan'ny trano fisakafoanana ho aingam-panahy amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa. Izany no mifamadika amin'ny roa taona lasa izay, raha niray tsikombakomba tamin'ny trano fisakafoanana ireo mpampiasa noho ny ezaka manokana amin'ny fananganana marika. Maro amin'ireo fironana voaresaka amin'ity olana ity no miverina amin'ny fahaiza-manaon'ireo mpampiasa media sosialy sy ny fitaoman-dry zareo.
Katie Ayoub, tonian-dahatsoratry ny fitantanana, dia mamaritra ny tranga ho toy ny “demokrasia amin'ny fanavaozana”. “Ny fantsona media sosialy malaza amin'izao fotoana izao dia manome fahafahana sy manentana ny mpanjifa tanora kokoa haneho ny fahaiza-mamorona sy ny fitiavany amin'ny fironana ara-tsakafo sy zava-pisotro. Ireny fironan-trano mahafinaritra ireny—toy ny charcuterie boards, ny mofo akondro ary ny quesadillas am-paosy—dia mirehitra haingana ao amin'ity habaka ity, mahazo vahana sy manorina hafanam-po amin'ny famerimberenana bebe kokoa. Afaka mitsambikina avy any ny chefs, chefs pastry ary mixologists, mampiasa ny kolontsaina pop vaovao, avy eo maka ireo tsiro sy endrika ireo ho tari-dalana vaovao sy mampientam-po ao amin'ny sakafony, "hoy i Ayoub.
Fironana 10 ambony indrindra amin'ny Flavor & The Menu amin'ny 2022:
1. Charcuterie amin'ny ambaratonga manaraka: Nahazo hery tamin'ny media sosialy, nanomboka nipoitra indray ny boards charcuterie ho toy ny azo zaraina farany.
2. Bocadillos Espaniola: Ny bocadillo tsotra sy rustic any Espaina dia mahita trano amin'ny sakafo amerikana.
3. Grika maoderina: Miala amin'ny Grika "amerikanina" kitschy izay namaritra ny sakafo ho an'ny taranaka maro, ny trano fisakafoanana dia mamerina ny dial miaraka amin'ny fomba fanamboarana sy akora tena izy.
4. Hanitra tropikaly: Miaraka amin'ny loko mampisondrotra ny toe-po, ny akora mavitrika ary ny fahatsapana fandosirana ny nosy, ny tsiron'ny tropikaly dia manome fandosirana sy fifaliana.
5. Fampiononana Meksikana: Ny fanovana amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny sakafo mendrika toy ny quesadillas, taquitos ary birria dia manome fitsangatsanganana azo antoka voafono amin'ny fampiononana an-trano.
6. Sakafo an-dranomasina avy amin'ny zavamaniry: Manomboka mihetsiketsika amin'ny sakafo ny hazan-dranomasina avy amin'ny zavamaniry, satria ireo mpamatsy vaovao dia mampiditra vokatra hafa amin'ny serivisy sakafo.
7. Sira: Mahazo vahana ny sira satria sady manamafy ny tsirony ihany no manana fiantraikany lehibe.
8. Savory Hand Pies: Ny foto-kevitra manokana momba ny pies tanana dia namelona indray ny motera fanavaozana manodidina ny empanadas, ny hena, ny paty, ny puffs ary ny maro hafa.
9. Akondro: Afaka manaisotra ireo sosona azo atao hita ao amin'ny akondro manetry tena ireo mpamorona ny sakafo: miantsoa ny feony tropikaly, mirona any amin'ny fampiononana any atsimo na mikaroka ireo mash-up eklektika.
10. Fisotroan-kafe mangatsiaka: Ny mpanjifa tanora dia mitondra fanavaozana amin'ny zava-pisotro misy kafe mangatsiaka, mitondra fanavaozana ny sakafo amin'ny karazana fampiharana maro kokoa, manomboka amin'ny tonika kafe tsy alka vaovao mankany amin'ny fampiasana bebe kokoa amin'ny cocktails.
Previous Data momba ny klinika vaovao tsara amin'ny marary voan'ny kanseran'ny tsinay
Manaraka Fomba vaovao hisorohana ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana